भूपू सिंगापुर पुलिसको पीडा बोल्दै मञ्चमै रुवाबासी (भिडियो) | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
भूपू सिंगापुर पुलिसको पीडा बोल्दै मञ्चमै रुवाबासी (भिडियो)
access_time२०७६ साल आश्विन ८ गते, बुधबार ०८:३३ PM chat_bubble_outline Comments folder_open मुख्य खबर​ भिडियो
काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका पीडा धेरै लामो समयदेखि चर्चामै छ । बेलायतले गरेको विभेदबारे नेपाली शासक र जनताले धेरथोर बुझेकै छन् । तर, एउटै किसिमको भर्ती तर कार्यथलो भने सिंगापुर हुनेहरुको पीडा भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् ।
सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत गोर्खालीको पीडा छुट्टै किसिमको छ । अझ भूतपूर्व सिंगापुरे पुलिसको पीडा त बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममै छताछुल्ल देखियो ।
ब्रिटिश-गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बीगेसो) सिंगापुर विभागले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सिंगापुरले आफूहरुमाथि गरेको विभेदबारे चर्चा गर्दै गर्दा संस्थाका पदाधिकारीहरु नै भक्कानिए । कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा बीगेसोका अध्यक्ष पद्मसुन्दर लिम्बूले आँशु थाम्न सकेनन् ।
अध्यक्षको तर्फबाट मन्तव्य राख्दै गर्दा अध्यक्ष लिम्बूले आक्रोस आँशुमा व्यक्त गरे । भाषण गर्दागर्दै केहीबेर उनी रोए । आँशु पुछे । पुनः उनले आफ्नो मन्तव्यलाई निरन्तरता दिए ।
बेलायतको भर्ना, सिंगापुरमा काम किन ?
कार्यक्रममा सिंगापुरमा कार्यरत रही सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुले आफुहरु कस्को भनेर प्रश्न गरेका छन् । बेलायतले भर्ना लिने र सिंगापुरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले उनीहरुले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
ब्रिटिस गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संगठन (बिगसो) सिंगापुर बिभागको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै उनीहरुले यस्तो बताएको हुन् । बुधबार काठमाडौंमा बिगेसो सिंगापुर बिभागको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको भएको छ ।
बेलायत, भारत र नेपालको त्रिपक्षीय सम्झौता (१९४७) को आधारमा बेलायतले सिंगापुरमा गोर्खा सैनिकको रुपमा नेपाली युवाहरुलाई भर्ति गर्दै आएको छ । सिंगापुरमा कार्यरत रहेको गोर्खा सैनिकलाई पनि बेलायतले नै भर्ना खुलाएर लाँदै आएको छ ।
बेलायतले भर्ना लिने र सिंगापुरमा काम गर्नुपर्ने गोर्खा सैनिकहरुलाई सिंगापुरले कार्यरतको समयमा सामान्य सेवा सुबिधा सिंगापुरे नागरिकलाई भन्दा न्यून रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
बिगेसोले सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकप्रति गर्दै आएको सिंगापुर सरकारको बिरोध गरेको छ । सिंगापुर सरकारले गार्खा सैनिकप्रति गरिरहेको व्यवहार अमानवीय भएको भन्दै बिरोध गरेका हुन् । नेपालका तर्फबाट गोर्खा सैनिकहरुले सिंगापुरमा रहेर सेवा गरेको ७० बर्षको भएको छ ।
सन् १९४७ को बेलायत, भारत र नेपालको संन्धि प्रश्चात गोर्खाहरुले सिंगापुरमा रहेर सेवा गरिरहेका छन् । ‘१९४७ को सन्धिलाई टेकेर बेलायतले मानव तस्करी गरेको छ’ बिगेसो अध्यक्ष लिम्बुले भने, ‘अब हामी बेलायतलाई मानव तस्कर गर्ने छुट दिन सक्दैनौं ।’
बिगेसोले बिदेशी तथा स्वदेशी सबैले आफुहरुलाई बहादुरको रुपमा सम्मानको तक्मा दिने तर बहादुरको नामभित्र सँधै गोर्खा सैनिकलाई जनावरको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो गरे ।
बिगेसोले १९४७ जस्ता असमान सन्धिको खारेज गरेर सिंगापुरमा कार्यरत सबै गोर्खा सैनिकलाई सिंगापुरको नागरीक जस्तै व्यवहार गर्न माग गरेका छन् ।
मानवियताको हिसावले हेर्दा पनि र सेवा सुबिधाको हिसाबले पनि अन्याय भएको भन्दै छिट्टै यस्तो बिषयको सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।
गोर्खा सैनिकहरुले आफुहरुलाई सिंगापुर नागरीकको जतिकै सेवा सुबिधा दिन माग गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो श्रीमती तथा छोरा छोरीले पाउने सुबिधा पाउन र सिंगापुरे केटीसँग विवाह गर्न पाउनुपर्ने सम्मको माग राखेका छन् ।
बिगेसोका बरिष्ठ सल्लाहकार प्रा.डा. ओम गुरुङले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा विभिन्न माग समेत समेटिएका छन् । अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा.डा. गुरुङले गोर्खाहरुमाथि भएको विभेदको अन्त हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्ने विभिन्न वत्ताले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई गरेको विभेदको अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले समेत पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रम बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीको सभापतित्वमा भएको थियो ।